Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo heshiis muhiim ah gaaray * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo heshiis muhiim ah gaaray
By Ardaan Yare	 On Nov 14, 2019
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa wada hadallo ay Nairobi ku yeesheen goor dhow ku gaaray heshiis diblumaasiyadeed oo lagu soo celinayo cilaaqaadkii labada dowladood.
Hoos ka Akhriso qodobada lagu heshiiyay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in wada hadalladaan aysan saameyn ku yeelan doonin kiiska horyaalla maxkamadda ICJ ee dacwadda hadda.
SIR Culus: Sheekh Shariif oo oo fashil iyo ceeb dhexda ka taaga kadib hadalkii kasoo yeeray